XOG+DAAWO: Wasaaradda Caafimaadka Puntland oo dib u qiimeynaysa Waxqabadkeedii 6 bilood, Xili Dhaliilo soo baxayaan? – Puntlandtimes
XOG+DAAWO: Wasaaradda Caafimaadka Puntland oo dib u qiimeynaysa Waxqabadkeedii 6 bilood, Xili Dhaliilo soo baxayaan?
GAROOWE(P-TIMES)- Wasaaradda Caafimaadka ee Puntland ayaa maanta kulan uga furmayaa Garoowe, kaas oo lagu qiimeynayo waxyaabihii u qabsoomay lixdii bilood ee lasoo dhaafay, waxaana kulankan ka qeybgalaya xubnaha ugu sareeya wasaaradda & Hay’addaha kala shaqeeya adeegyada caafimaadka.
Wasaaradda Caafimaadka ayaa ah meelaha ugu muhiimsan ee dawladda Puntland, waxaana ay maamushaa dhammaan adeegyada caafimaadka ee dalka.
Baahida ugu weyn ee ay qabaan shacabka Puntland maanta ayaa ah helitaanka adeegyo caafimaad oo qiimo kasta ha joogeene tayo wanaagsan leh, waxaana gabi ahaanba aan kaalintii loo baahnaa qaadan Isbitaalada dawladda.
Niyadjabkii ugu xumaa ayaa dul-hoganaya caafimaadka Puntland, 20 sanno ka dibna wali baahiyaha caafimaad ee dadka Puntland waxaa loo aadayaa gobalada deriska ah la ah, sidda Hargeysa & Muqdisho.
Lixdii bilood ee lasoo dhaafay ayey wasaaraddu qabatay shaqooyin kala duwan oo ay ku jiraan in ay maro-kaneecooyin ka qeybisay gobbalada Puntland, laakiin su’aalaha taagan waxaa kamid ah maxaa laga qabtay adeegyada caafimaadka Asaasiga ah ee gobalada.
Isbitaalada Garoowe, Gaalkacyo & Boosaaso ayaa ah kuwa ugu badan ee ay baahiyaha caafimaad ka jiraan, waxaana dhammaantood aan laga heli karin adeegyo caafimaad oo tayo leh, waana mida keentay in ay dad badan ka door-bidaan magaalooyin kale oo Soomaaliyeed.
Balan-qaadyadii Madaxweynaha Puntland ee tartanka doorashada, waxaa kamid ahaa helitaanka caafimaad tayo leh ugu yaraan in laga maarmo in magaalooyinka kale ee dalka loo aado waxyaabo laga hirgalin karro Puntland, taasina waa mida ay sugayaan shacabku in loo hirgaliyo mudooyinka ugu horeeya.
Inkastoo, 6 bilood ka dib Wasaaradda Caafimaadku waxay qiimeynaysaa waxqabadkeeda, balse su’aalaha lays weydiinayo waxaa kamid ah maxaa la qabtay, maadaama Caafimaadka Asaasiga ah ee dawladdu wali yahay mid dayacan oo ay dad ugu dhimanayaan dayacaas Isbitaalada waa weyn.
Wasiirka Caafimaadku wuxuu dhawaan daaha ka rogay in uu joogsaday Dhaqaale la doonayay in lagu dhiso Isbitaal Casri ah oo horey loogu heshiiyey in laga hirgaliyo magaaada Garoowe, lacagtiina inyar oo kamid ah ay hadda dabagal ku hayaan, deeqdaas waxaa bixinaysay dawladda Jarmalka.
Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in ujeedada lacagta loo hakiyey ay tahay Isbitaalka Garoowe ee horey u dhisnaa oo aan helin baahiyihii u baahnaa, sidaas oo kalena ay jiraan in aan la helin mudo dheer dibu dayactir iyo shaqaalaha oo mushaarkoodii aysan bixin Xukuumaddii hore ee Madaxweyne Gaas.